Canadian University of Dubai - Study na United Arab Emirates
Canadian University of Dubai Nkọwa
acronym : atagharịkwa ọnụ
tọrọ ntọala : 2006
Echefukwala atụle Canadian University of Dubai
Idebanye aha na Canadian University of Dubai
Canadian University Dubai, hiwere na 2006, emi odude ke esịt Dubai. Onye ọ bụla n'ime anyị agụmakwụkwọ mmemme dabeere Canadian Usoro Ọmụmụ na ọzụzụ ụkpụrụ. Nke a na-enye ụmụ akwụkwọ ohere nke a Canadian mmụta mgbe n'ihe banyere omenala na ụkpụrụ nke United Arab Emirates. na n'elu 100 mba dị iche iche na-akpọ anyị University home, anyị na ụmụ akwụkwọ na-ewu àkwà mmiri gafee omenala na kọntinent.
Mgbaru ọsọ anyị bụ ime ka nwa akwụkwọ ọ bụla na-atụ dị ka a haziri ahazi na ndụ learner na ezi zuru ụwa ọnụ amaala. Iji mezuo nke a, mesiri ike ọ bụghị naanị na n'agụmakwụkwọ, kamakwa on a gbasaa itinye aka. Anyị vibrant-amụrụ ndụ na-enye ihe maka mmadụ nile, si egwuregwu na concerts, na dị iche iche mba njem na n'etiti. Ụmụ akwụkwọ na-arụkwa ọtụtụ dị iche iche nke omume ọha na eze, gụnyere obodo fundraising, otu ụlọ, na IZIRỊTA ihe.
10 mere ka na-ahọrọ Canadian University Dubai
E nwere ọtụtụ ihe na-ahọrọ Canadian University Dubai gị Undergraduate ma ọ gụsịrị akwụkwọ ọmụmụ, kama ka anyị na-agwa gị ihe na-esetịpụrụ anyị dị iche n'ebe ndị ọgbọ anyị:
1. Canadian dabeere na usoro ọmụmụ
Anyị na-enye ihe ha mụtara na Canadian usoro ọmụmụ, -enye anyị mba dị mma na ịtụkwasị obi.
2. Nhọrọ gaa akwụkwọ dị na Canada
Dị ka a Portal Canadian agụmakwụkwọ ka elu, i nwere ike amalite gị ogo na atagharịkwa ọnụ wee mezue gị ọmụmụ na gụsịrị akwụkwọ si onye nke anyị na onye òtù ọlụlụ elee Canada.
Ihe niile anyị na omume na-nyere ikike ịbụ site UAE Ministry of Education: Higher Education Affairs.
4. International ngalaba
Anyị zuru ụwa ngalaba na-ukwuu ruru eru na inspirational na ha ubi, eweta otutu ozizi ekwekọghị na nkà ihe ọmụma si gafee n'ụwa.
5. gụsịrị akwụkwọ employability
Na ihe ha mụtara na Canadian ụkpụrụ nke kenyere mmụta ga esi, Atagharịkwa ọnụ na-agụsị akwụkwọ nwere ihe dị ukwuu aru na mba ọrụ ahịa.
6. mgbanwe mmụta
Anyị na-enye mgbanwe omume schedules - mgbede na izu ụka ọmụmụ dị maka ma Undergraduate na gụsịrị akwụkwọ na mmemme.
7. Business-district ebe
Anyị nwere adaba ogbe ndịda ebe na obi nke Dubai azụmahịa district, na ọkaibe agụmakwụkwọ na ntụrụndụ ụlọ ọrụ.
8. -Amụrụ na-eche nanị obibia
Atagharịkwa ọnụ bụ a na-amụrụ na-eche nanị mahadum, ebe anyị na-akpọrọ-amụrụ ihe ịga nke ọma karịa ihe niile ọzọ.
9. Research ohere
Anyị Research Centre na-enye ụmụ akwụkwọ na ohere itinye aka na mbepụ nnyocha mba na na UAE.
10. Multicultural amụrụ obodo
Anyị nwere a n'ezie multicultural mmụta gburugburu ebe obibi, na ụmụ akwụkwọ si n'elu 100 mba.
School of Architecture na Interior Design
The School of Architecture na Interior Design enye abụọ Bachelor mmemme; Bachelor nke Science na Interior Design, na Bachelor nke Architecture. Ma degrees na a School buru ihe 4-5 afọ, na mbụ na nke abụọ afọ nke ọmụmụ bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ, ikwe ụmụ akwụkwọ mgbanwe nke na-agbanwe agbanwe n'agbata mmemme ga ha na-ahọrọ tupu malitere n'arọ nke-atọ.
The School of Business Administration awade ise mmemme, anọ nke anọ afọ na mmemme, categorized n'okpuru Bachelor nke Business Administration ogo, na dị iche iche ọkachamara; Marketing, Human Resource Management, Accounting na Finance na E-Business. An-akpakọrịta n'ókè na Marketing-dịnụ dị ka a 2-afọ omume.
The School of Engineering, Applied Science and Technology enye abụọ ọkachamara degrees; Bachelor nke Science na Telecommunications Engineering, na Bachelor nke Computer na ịkparịta ụka n'Ịntanet Engineering Technology.
School of Environment na Health Sciences
The School of Environment na Health Sciences enye abụọ isi degrees na ịzụ ndị mmadụ n'otu n'otu na-proactive na ike ọbụna tupu ha Masters, ndị degrees dị na; Bachelor nke Science na Environmental Health Management na Bachelor nke Science na Health Organization Management.
School of Communication na Media Studies
The School of Communication na Media Studies awade ọmụmụ na atọ dị iche iche ubi, Journalism, Public mmekọahụ na Advertising, n'ihi na ugbu a ọ dị, atọ degrees, abụọ nke bụ otu n'ime ọdịnaya ma na-ma-enweta ya na English ma ọ bụ Arabic. The Bachelor nke Arts na Communication ogo bụ dị na Bekee ma ọ bụ Arabic asụsụ na ga-omume-amụba na n'ọdịnihu dị nso. The atọ ogo bụ a Bachelor nke Arts na English Language na Translation.
Master nke Business Administration (MBA)
Master na Ozi Technology Management na Governance (MITGOV)
Ị chọrọ atụle Canadian University of Dubai ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Canadian University of Dubai na Map
photos: Canadian University of Dubai ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Canadian University of Dubai.